Translator Newsletter: Rehefa tsy adika, Ny lahy sy vavy eo amin’ny fiteny sy ny maro hafa! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Jona 2019 14:38 GMT
Tongasoa eto amin'ity fizarana Taratasim-baovaon'ny mpandika teny! Androany isika dia hiresaka momba ny…
Rehefa Inona no Tsy adika
Pikantsary nalaina tao amin'ny http://www.nybooks.com/
Amin'izao tontolo novelarina ho manerantany izao, dia matetika lasa mora kokoa ny fifandraisana sy fifampiresahana noho ny fandikanteny. Afaka mamaky boky isika ary mijery sarimihetsika tsy ho vitantsika raha tsy noho ny fandikan-teny. Saingy misy fotoana ve tsara kokoa raha havela amin'ny fiteny niaviany ny zavatra? Tim Parks mamakafaka ity hevitra ity amin'ny lahatsoratra iray mitondra ny lohateny hoe “Rehefa Inona no tsy Adika” tao amin'ny New York Review of Books, izay anontaniany raha tokony hatao ny fandikanteny ny hoe Decameron. Inona ny hevitrao?
Ny fivoaran'ny sokajin'ny voambolana (lahy sy vavy)
Pikantsary nalaina tao amin'ny https://www.babbel.com/
Araka ny mety ho fantatrao amin'ny fiteny maro, manana ny sokajiny (lahy sy ny vavy) ny anarana. Amin'ny teny Espaniôla, ohatra, vavy ny seza ary lahy ny vata fampangatsiahana. Ny fiteny Anglisy anefa dia manalavitra izany amin'ny ankapobeny ary tsy mampiasa sokajy mba hamaritana ireo tsy olombelona. Fa Ahoana anefa no nahatonga izany rehetra izany? Marion Maurin namoaka lahatsoratra mahagaga iray mitondra ny lohateny hoe “Ny Fivoaran'ny sokajim-boambolana: Nahoana no Misy sokajy roa ny amin'ny teny Frantsay, ny Alemàna manana Telo, ary ny Anglisy tsy miraharaha” mba hanazava izany rehetra izany. Vakio ary ampahafantaro anay izay eritreritrareo? Firy ny sokajy ampiasain'ny tenin-drazanao, raha misy?
Toro-lalana ho an'ny mpandika teny
Pikantsary nalaina tao amin'ny https://www.facebook.com
Tsy fantatro ny momba anao, fa rehefa miasa amin'ny fandikan-teny aho dia manao fikarohana betsaka amin'ny aterineto. Manomboka amin'ny fitadiavana fitenin-jatovo hatramin'ny fitadiavana fomba tsara indrindra handikana ny anaran'ny antoko politika, ampahany manan-danja amin'ny dingan'ny fandikan-teny ataoko ny fikarohana antserasera. Carlos Djomo, mpandika teny Anglisy-Frantsay sady mpandresy tamin'ny loka 2015 Proz Community Choice ho an'ny Lahatsoratra Tsara Dikan-teny Indrindra nanoratra boky iray antsoina hoe Tadiavo, jereo: torolalana kely amin'ny fikarohana antserasera. Fitaovan-tsarobidy izany ary afaka manafatra izany jerena Kindle amin'ny vidiny 2.99 dolara fotsiny ianao! (Raha tsy manana Kindle ianao, dia afaka mamaky izany amin'ny fitaovana hafa amin'ny alalan'ny fitrohana ny fampiharana Kindle.)
Fanamby lehibe ho an'ny mpandika teny
Pikantsary nalaina tao amin'ny http://aclang.com
Ny fomba tsara indrindra hanatsaranao ny asa tananao dia ny mahafantatra ny fahalemenao ary miasa amin'izany. Avi Kallenbach nametraka lisitra mahaliana ahitana ireo fanamby atrehin'ny mpandika teny amin'izao fotoana izao, mitodika amin'ny zava-drehetra manomboka amin'ny literatiora hatramin'ny firesahana ny fiteny manokana (idiomatique). Jereo ato ary lazao anay – inona araka ny eritreritrao no fanambinao lehibe indrindra amin'ny maha- mpandika teny? Inona no antenainao hohatsaraina? Raha mahazo valiny ampy isika, dia angamba mety hanangana ny toro-lanana GV antsika manokana!
Pikantsary nalaina tao amin'ny https://www.facebook.com/CulturesConnection/
Ary raha sambany mamaky ity gazety ity ianao ary te-hiaraka amin'ny Global Voices dia lazao anay bebe kokoa ato ny momba anao!